डा. केसीले पाए अवकाश, भन्छन्– देशका कुनाकाप्चामा गएर पनि अनशन बस्छु - Birgunj Sanjalडा. केसीले पाए अवकाश, भन्छन्– देशका कुनाकाप्चामा गएर पनि अनशन बस्छु - Birgunj Sanjalडा. केसीले पाए अवकाश, भन्छन्– देशका कुनाकाप्चामा गएर पनि अनशन बस्छु - Birgunj Sanjal
डा. केसीले पाए अवकाश, भन्छन्– देशका कुनाकाप्चामा गएर पनि अनशन बस्छु
२७ आश्विन २०७६, सोमबार ११:३२
काठमाडौं । २६ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत चिकित्सिक गोविन्द केसीले अवकाश पाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर पटकपटक अनशन बस्दै आएका केसीले अवकाश हुँदै गर्दा पनि ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।